abcnepali | » मेची पुलको व्यथाः कन्टेनरमा ल्याउनु पर्ने सामान राँगागाडीमा ! मेची पुलको व्यथाः कन्टेनरमा ल्याउनु पर्ने सामान राँगागाडीमा ! – abcnepali
झापा: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भद्रपुरको मेची पुलको गएको माघ १७ गते उद्घाटन गरेपनि भारततर्फ सडक नबन्दा व्यावसयीले राँगा गाडीमा सामान ढुवानी गर्न बाध्य भएका छन् ।
नेपालतर्फ सुविधा सम्पन्न पुल र सडक निर्माण भए पनि भारततर्फ भन्सार र सडकको सुविधा नहुँदा कन्टेनरमा ल्याउनु पर्ने सामान राँगा गाडीमा ढुवानी हुँदै आएको छ ।
भद्रपुरमा मेची पुल निर्माण नहुँदा र यातायातको पर्याप्त बिकास नभएको अवस्थामा गोरुगाडा वा राँगागाडामा सामान ढुवानी गर्नु समान्य भएपनि भद्रपुरमा दुई देश बीचको आयात निर्यातमा अझै साँगा गाढीको भर पर्नु पर्ने अवस्था छ ।
इतिहास भइसकेको राँगा गाढी नेपालकै पुरानो शहर भद्रपुरमा भने जिवन्त देख्न सकिन्छ । अन्यत्र कार, जिप, ट्रक र ट्र्याक्टर व्यापक हुँदै गएपछि जनावरले तान्ने गाडीहरू प्रायः हराई सकेका छन् । तर, यतिबेला भद्रपुर भन्सार कार्यालय या छेवैको मेची पुलमा भने सामान ढुवानीका लागि राँगा गाडीको प्रयोग भइरहेको छ । मेची नदिमा सामान ढुवानीका लागि राँगा गाढीको लस्कर देख्न सकन्छ ।
व्यापारीहरूले भारतको कोलकाता, सिलीगुढी, मुम्बईदेखि आयात गरेर नेपाल ल्याएका सामग्रीहरू भारतको विहारस्थित गलगलिया नाकाबाट राँगागाडीमा लादेर भद्रपुर भन्सार ल्याउने गरेका छन् । मोटरको बाटो सहज नभएको कारण व्यापारीहरूसँग राँगागाडीमा ढुवानी गर्नुको विकल्प पनि छैन ।
दुई देशबीचको नाकामा आजको एक्काइसौं शताब्दीमा राँगागाडीमा सामान ओसारपसार गर्नु व्यापारीहरूको रहर होइन । भारत विहारको गलगलिया र नेपालको भद्रपुर जोड्ने मेची नदीमा हालै निर्माण गरिएको पक्की पुल सञ्चालनमा आए पनि भारतले आफ्नो भागतिरको ४ सय मिटर बाटो नबनाउँदा ढुवानीका लागि ट्रक, जिप, ट्र्याक्टर जस्ता साधन प्रयोग हुन नसकेको हो ।
सामान ल्याउनै पर्ने बाध्यताका कारण व्यापारीहरूले पहिल्यैदेखिको राँगागाडी रोज्न बाध्य भएका हुन् । “पहिले बाटो थियो पुल थिएन, अहिले पुल बन्यो बाटो छैन,” भद्रपुर नगरपालिका–५ का कपडा व्यापारी सञ्जीव घोषले भने, “गलगलिया भन्सारमा जाँच गराएर राँगागाडीमा सामान नेपाल भित्र्याउनु पर्दाको सकस हामीलाई मात्र थाहा छ । भारतले बाटो बनाइदिए सुविधा हुनेथियो ।”
उनले एकपटकमा राँगागाडीमा दश पोका कपडा ल्याउने गरेको बताए । एकसय पोका गाडीमा एकैपटकमा ल्याउन पाएको भए दुई चार हजार रुपैयाँ भाडामा खर्च गरे पुग्ने उनको भनाइ छ । तर, अहिले उनलाई दश पोका दश पटकमा राँगागाडीमा ओसार्नु परिरहेको छ । राँगागाडीलाई प्रति पोका १ सय ५० रुपैयाँ तिर्ने गरिएको छ ।
उनका अनुसार मेची पुल बने पनि भारतीय सीमा क्षेत्रमा बाटो नहुँदा यस्तो सास्ती खेप्नु परेको हो । उनी भद्रपुर भन्सार कार्यालयमा सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने व्यापारीमध्येमा आफू रहेको दाबी गर्दछन् ।
मेची पुलको पूर्वी छेउबाट १ सय ५० मिटरसम्म नेपालकै भूभाग पर्दछ । पुलको मुख भारतको पश्चिम बङ्गाल र विहार प्रान्तको सीमा क्षेत्रमा परेको कारण सडक कुन प्रान्ततिर लैजाने भन्नेमा भारतमा विवाद कायमै रहँदा सडकको निर्माण हुन नसकेको बुझिएको छ ।
भद्रपुर बजारमा फलामको व्यापार गर्दै आएका सुरेश साहले सिलिगुढीबाट सामान खरिद गरेर गलगलियासम्म गाडीमा ल्याउने गरेको र नेपालतर्फ चाहीँ प्रति राँगागाडी भारु ४ सय तिरेर ढुवानी गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार भारततर्फ बाटो बनिसकेको भए सो सामान २ सय रुपैयाँ तिर्दा नेपाल ल्याउन सकिन्थ्यो ।
झापा उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव पङ्कज शर्माले व्यापारीले पुल बन्दा पनि र नबन्दा पनि उस्तै समस्या भोगिरहनु विडम्बना भएको बताए । उनले बाटो अभावमा पिकअप भ्यान, ट्रक र कन्टेनर नआउँदा व्यापारीहरूले भारतबाट आयात गरिने सामान ल्याउन राँगागाडीको प्रयोग गरेको बताए ।
भद्रपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख फडिन्द्र खतिवडाले शुरु शुरुमा आफू भन्सार कार्यालयमा आउँदा सामान लाद्ने–झार्ने गरिरहेका राँगागाडी देखेर छक्क परेको तर, अहिले सामान्य लाग्न थालेको बताए ।
व्यापारीहरूले सामान राँगागाडीमै ल्याएर भन्सारको गोदाममा राख्ने गर्छन् । व्यापारीहरूले भारतीय भन्सारमा प्रक्रिया पूरा गरेर राँगागाडीमा सामान नेपाल ल्याई राजस्व बुझाउने गरेका छन् ।
“भारतीय पक्षले बाटो बनाउन डिपिआर गरिसकेको थाहा भएको छ,” उनले भने, “पुल बनिसकेर पनि भारततिर लिङ्क रोड नहुँदा समस्या भएको हो । चाँडै समाधान हुने अपेक्षा छ ।”
भद्रपुर भन्सारलाई सरकारले स्तरोन्नति गरेर दश महिना अघि पूर्ण भन्सारको मान्यता दिएको थियो । गएको आठ महिनामा यो भन्सारले १३ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन समेत गरिसकेको छ । भारततिर लिङ्क रोड बनेमा व्यापार सहज हुनाको साथै राजस्व सङ्कलन निकै बढ्ने भन्सार प्रमुख खतिवडा बताउँछन् ।
कुनै बेला नेपालकै मुख्य तीन भन्सारमा गणना हुने भद्रपुर भन्सार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माणसँगै मेची पुल काँकडभिट्टामा बनेपछि मृतशहर जस्तै भएको थियो । उद्योग व्यापार सुस्ताएको थियो ।
लामो प्रयासपछि मेचीमा पक्की पुल बनेकाले भद्रपुरवासीले व्यापारिक चहलपहल बढ््ने आशा गरेका थिए । तर, भारतले पुल जोड्ने ४ सय मिटर सडक नबनाइदिँदा भद्रपुरको सपना अधुरै मात्र भएको छैन, फेरि राँगागाडीको युगमै फर्किनु परेको छ ।सजिलो खबरबाट